Yivaka i-Wedge yegalofu: I-Color Options ekhethiweyo
Uvakala igalofu yayiyigama lenkampani yegalufu ye-golf eyayijolise kuphela kwi-wedge, kwaye emva koko ngo-2003, sabhala inqaku elingezantsi malunga ne-Feel's wedge lineup.
Kwaye kwakungumgca obalabala, ngokwenene. Yiva iGalofu ehlolwe ngemibala kakhulu njengoko yenzayo nge- loft wedge kunye nezinketho. Kwakuyinkqubo yokufumana ingqalelo (kunye nexesha layo langaphambili).
Hayi, ithemba elichazwe kwinqaku lethu eliphambili malunga nekamva leGream Golf alizange liphume.
Le nkampani yayijikeleze ixesha elide, ikhulula i-wedge ye-73 degree kunye nohlu lwe-wedge ye-2010, phakathi kwezinye iimveliso.
Ukususela kwixesha leeNtshontsho zeeNkcazo ezigqitywe ngezantsi, inkampani yayenza oko yayibizwa ngokuba yi- Release Release . Namhlanje kusekho uphawu lwe-Feel Grips, umntwana wesantya kwenkampani yokuqala (engasasekho).
Nantsi into esiyibhale ngasese malunga ne-Feel Golf wedges ngo-2003:
Ukuva Ukutshata kweGalofu kwiNgcono eQaphelayo
Ngo-Ephreli 20, 2003 - Ukuziva iGalofu akuyona igama elibonakalayo phakathi kweebhola zegalufa. Akuyona inkampani enkulu, kwaye ayihlawuli imali enkulu yokudlala abadlali ukuba badlale iiklabhu zayo.
Kwaye inkampani ihlale iyaziwa ngokubanzi ngemida. Ukuyaziwa ngokugqithiseleyo ngemigqomo akuqhelekanga indlela yokufumana uluntu oluninzi.
Uluntu olungakumbi luya kwenzeka kwiNkundla yeGalafu, nangona kunjalo, ngenxa yezinto ezimbini. Okokuqala, ukuqaliswa kwechungechunge lokuqhuba umqhubi ophezulu (jonga ukuhlaziywa, uDkt Feel Titanium Series Series Driver) kunye nolwazi olukhulayo lwaloo mivuzo.
Zonke ezo zibini. Ngenxa yokuba iGoli igqiba ininzi .
Umva uMsunguli weGalofu, uDkt. Lee Miller, uzuze igama lomnxeba "uDkt Feel" ukusuka kubadlali bePGA Tour xa, njengengcali yePGA, wayekhonza njengoluhlobo olungabonakaliyo lwebhola kwiinkwenkwezi. (UMiller, ngendlela, unobunjineli yobunjineli waza wenza ubuchule bakhe basebenzela i-General Motors kunye ne-NASA ngaphambi kokuba aphendule kwiikomiti zegalufu ixesha elipheleleyo.)
Ivala imigqa yegalofu yonke imida emihlanu: 46, 52, 56, 60 ne-64 degree degree. Bobabini ngaphakathi kwechungechunge lomntu kunye nakulo lonke uchungechunge, ama-specs afanayo: ubude obufanayo, ubude obufanayo obufanayo, ubunzima obufanayo obufanayo, amanqaku afanayo alinganayo , ukukhawulela okufanayo kunye ne- swingweight efanayo (D-8).
Kwakhona zifana neengxubane eziphazamisayo . I-degree-46 ine-degrees 4; i-52, i-bounce yee-9 degrees; i-56, i-bounce yee-6 degrees; i-degree-60, umda wee-3 degrees kunye ne-64 degree, i-bounce ye-degree.
Ziziphi iinqununu ezintlanu esizithethayo? Ezi:
Khawuqwalasele le migqomo "eqhelekileyo" evela kuDkt. ezo zilandelayo ziyahlukahlukileyo. Kukho indawo eselinganayo yezithende ezithengisa i-clubhead ejikelezayo kunye neyodwa i- cambered sole ukuze kukhuthazwe ukuhamba ngehlabathi okanye ngesantya .
Ukugqibela kwesigxina sesigxina sesigxina esivela kwinto eyenziwa yinkampani ngokuthi "i-plasma esebenzayo yokufakela i-implantation" eyenza iqela layo liboniswe ngombala lensimbi ngaphandle kokuchaphazela ukuziva kwayo.
Umklami we-designer usebenzisa ukugqitywa kwesigxina sesigxina kwedwa kunye nobuso kodwa isicelo somyili kwi- clubhead . I-degree-46 ibhedu, i-yellow-degree-yellow, i-56 degree degree blue, i-red-degree-60 kunye ne-64 degree degree.
I-Raw Feel wedges isebenzise i-8620 yensimbi, insimbi enobumba ekufanele ikwazi ukugquma ngaphezu kwexesha. Kodwa oko akuyona into embi kwintambo, kuba iphumela ekugqibeleni ngakumbi kwaye ilunge kangcono.
UDkt Uvale uchungechunge lwe-Midnight u-oyile angenza i-oil engaphezulu njengento yeoli. Oko kukuthi, ngokunyamezela. Inkampani isebenzisa i-alloy yokubambisa ngobuso bethusi-beryllium obangela ukuphinda, ukulawula okungakumbi kunye nomgama omde.
Leyo yimivuzo emininzi yokukhetha kuyo, enoba ufuna irhafu enye okanye i-wedge set set.
Abaqhubi abatsha beGalofu: Vumela Ezi Zizinja Ezinkulu Zidla
Ukuhlaziywa kwe-Analytics Swing Analyzer
Iiglasi zeGalofu: Umlando othakazelisayo wezixhobo zokusebenza
Amantombazana ngokuqhelekileyo agqoke iiSatifikethi eziMhlophe zoMfanekiso; Abafana Bembethe Umnyama
I-Cobra King Yakha i-Tec kwaye ifakwe i-CB / MB i-Combo Iimpawu zeIirons
I-Hawaii Pacific University Admissions
UMongameli uWarren Harding
Uhlolo lukaDavid Copperfield
Amanyathelo okufikelela kwiGoli epheleleyo ngokufudumalayo
Ngubani owayengumongameli ngexesha ngalinye leMfazwe emikhulu yase-US?
I-Beloit College i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Massachusetts College ye-Liberal Arts Admissions
Indlela yokudibanisa isenzi sesiSpeyin "iPoner"
Iimpawu eziphezulu eziphezulu kwi-Netflix
Kutheni Kubalulekile Ukulondoloza Intliziyo Yakho
Iindlela ezona zilungele ukulungiselela i-Yom Kippur (okanye nayiphi na) ngokukhawuleza
IsiNgesi IsiLwimi IsiGama
Iingcebiso eziBhozo eziPhambili zoBomi bakho baseFrancophile
Inkcazo yeNewory Growth Theory